Waxbarashada Gaarka ah - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Qoysaska Cusub >
Fursado Loo Siman Yahay Si Loo Dedejiyo Koritaanka
Waxaan siineynaa adeegyo isdaba-joog ah oo loogu talagalay ardayda naafada ah. Waaxdeenna Waxbarshada Gaarka ah waxay u adeegtaa ku dhowaad 4,500 oo arday oo da 'ahaan u dhexeeya dhalashada illaa 21 jir. Dhammaan iskuulada ku yaal degmadeena waxay bixiyaan adeegyo waxbarasho gaar ah macalimiinta shatiyeysan ee shatiyada leh waxayna bixiyaan taakuleyn faragelin, qiimeyn iyo waxbarid waxbarashada khaaska ah.
Degmada 196 waxay bixisaa noocyo badan oo adeeg bixin ah. Ardayda badankood waxay ka helaan adeegyo dugsiga xaafadooda iyo, markay suurtagal tahay, fasalkooda waxbarashada guud.
Tacliinta Gaarka ah waa waxbarasho khaas ah oo u gaar ah ardayga iyada oo aan waalidiinta wax kharash ah uga fadhin. Tilmaamaha waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha gaarka ah ee ilmaha naafada ah. Carruurtu waa inay buuxiyaan shuruudo gaar ah oo ay dejiyeen Gobolka Minnesota iyo Dawladda Federaalka si ay u helaan adeegyada waxbarashada gaarka ah. Waxbarashada Gaarka ah waa adeeg waxbarasho, maahan meel.
Si loo helo adeegyada waxbarashada gaarka ah, waa in ardaygu marka hore la qiimeeyo oo uu la kulmaa shuruudaha gobolka. Markaad uqalanto, Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP) ayaa loo sameeyay ardayga.
Barnaamijyada La Heli Karo
Degmada 196 waxay haysaa barnaamij dhameystiran oo ku saabsan adeegyada waxbarashada gaarka ah ee Carruurnimada Hore ee carruurta da'doodu tahay dhalashada illaa bilowga dugsiga barbaarinta. Carruurta da'doodu u dhaxeyso 3-5 jir oo leh naafonimo garasho ama jireed ama daahitaan xagga koritaanka ah waxaa loogu adeegaa goobo kala duwan oo soo dhoweyn iyo kobcin waxbarasho ah.
Dakota Ridge waa dugsi loogu talagalay ardayda Degmooyinka 196 ee ka diiwaangashan adeegyada waxbarashada gaarka ah ee la kulma caqabado bulsho, shucuur iyo dhaqan. Dakota Ridge waxay ardayda u siisaa meel aamin ah oo ay kaga shaqeeyaan arrimaha bulshada, shucuurta iyo qawaaniinta iyo kordhinta dhaqanka bulshada u janjeera.
Barnaamijka Transition Plus waa barnaamij loogu talagalay dhalinyarada qaangaarka ah ee da'doodu tahay 18-21 jir oo leh baahiyo gaar ah, kuwaas oo u baahan caawimaad iyo taageero inta ay ku guda jiraan yoolalka iyo ujeeddooyinka kala-guurka. Waa barnaamij bulshada ku saleysan oo xoogga saaraya shaqaalaynta iyo xirfadaha nololeed ee madaxa bannaan.
Job Title: Coord of Special Education
Titles: Coord of Special Education
Locations: District Service Center
Locations: Dakota Valley Learning Center
Locations: Transition Plus
Locations: Dakota Ridge School